Ryan Giggs oo daaha ka rogay xagaagii uu ku sigtay ku tagista Manchester United iyo sababtii u wacnayd – Gool FM
Ryan Giggs oo daaha ka rogay xagaagii uu ku sigtay ku tagista Manchester United iyo sababtii u wacnayd
Dajiye May 11, 2020
(Wales) 11 Maaajo 2020. Tababaraha xulka qaranka Wales ee Ryan Giggs ayaa shaaciyay in kaliya hal jeer uu ku sigtay ka tagista kooxda Manchester United halkaasoo uu xirfaddiisa ciyaareed oo idil uu ku qaatay.
Halyeyga reer Wales ayaa 24 xilli ciyaareed ku sugnaa Old Trafford, isagoo xilli ciyaareedkiisii ugu dambeeyay xilka tababare u hayay si ku meel gaar ah, ka hor inta uusan ciyaaraha isaga fariisan sanadkii 2014.
Giggs ayaa 963 kulan u saftay Red Devil, isagoo ah xiddiga ugu safashada kooxda Manchester United, balse maalmo mugdi ah ayaa ku jiray 24-ka xilli ciyaareed ee uu xirnaa maaliyadda guduudka ah.
46-jirkan ayaa ku caan ku ahaa ka ciyaarista garabka ka hor inta uusan macallinkiisii hore ee Sir Alex Ferguson u baddelin kubbad abuure khadka dhexe ka ciyaara.
Xilligii is baddelka uu ku immaanayay booska uu ka ciyaaro, waxaa Giggs soo food saarray shaki wayn oo mustaqbalkiisa ku aaddan, isagoo xagaagii 2004 ku sigtay inuu ka hayaamo kooxd Manchester United xilligaas oo ay horyaalka Premier League ku waayeen gacanta kooxda Arsenal.
“Qiyaastii, waxay ahayd 2003/2004, si heer sare ah kuma aanan billaabanin xilli ciyaareedkaas” ayuu Giggs u sheegay BeIN Sport.
“Waxay ahayd xagaagii uu David Beckham naga tagay, waxay ii ahayd xilligii aan ugu dhawaa inaan kooxda ka tago.
“Qaab ciyaareedkeyga ma uusan fiicnayn, waxayna ahayd xilligii aan garabka ka soo baddelnayay oo dhexda aan soo galayay. Waxaan lumiyay orodkii. Xaqiiqdii waxaan ku dhammeystay xilli ciyaareedka anigoo xoogaa awood yeeshay, balse haddii aana roonaan lahayn, yaa ogaa wixii xigi lahaa?” ayuu hadalkiisa ku daray halyeyga Manchester United.
Giggs ayaa xilligaas lala xiriiriyay kooxaha Inter Milan, Juventus iyo Bolton oo uu xilligaas macallin u ahaa Sam Allardyce, balse go’aankiisii ahaa inuu Old Trafford sii joogo ayaa noqday mid guuleystay, taariikhna reerbay.
Halyeygan ayaa wixii markaas ka dambeeyay xubin joogto ah ka ahaa kooxda Manchester United isagoo waqtigaas kaddib kula guuleystay shan horyaal oo Premier League ah, sidoo kalena waxa uu ciyaaray saddex jeer fiinaalka tartanka Champions League ka hor inta uusan 10 sano kaddib ciyaaraha ka fariisan.
Pep Guardiola oo weerar ku ah Bayern Munich… (Yuu ka doonayaa?)
Real Madrid oo waqti cayiman u qabatay Arsenal si ay u kala caddeyso inay ka iibineyso Aubameyang